မူဆယ် လမ်းကြောင်းမှ တင်ပို့မည့် ဆန်တန်ချိန် တစ်သောင်းအတွက် နမူနာကို တရုတ်မှ တာဝန်ရှိသူမျာ?? - Yangon Media Group
မူဆယ် လမ်းကြောင်းမှ တင်ပို့မည့် ဆန်တန်ချိန် တစ်သောင်းအတွက် နမူနာကို တရုတ်မှ တာဝန်ရှိသူမျာ??
”ကနဦးဆန်တန်ချိန်တစ်သောင်းနယ်စပ်ကနေ ပို့မယ်။ ဒီ ၁၂ ရက်မှာ ဆန်နမူနာလာကြည့် မယ်။ ဘာမှထပ်ဆွေးနွေးစရာမရှိ ဘူး။ ရောင်းပြီးသား၊စာချုပ်ချုပ်ပြီးသားပါ”ဟု ၎င်းင်းကပြောသည်။ ဧပြီလအတွင်းက မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန် သွယ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်း ပြည်သူ့အစိုးရနှင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနတို့အကြားကုန်ဖလှယ်မှုစနစ်(Barter system ) ဖြင့် ကုန် သွယ်မှုပြုရန် MoU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် မေလကုန်ပိုင်းက ကူမင်းအစိုးရစီးပွားရေးဌာ နနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်တုိ့သည် မူဆယ်နယ်စပ် မှ ဆန်တန်ချိန်တစ်သောင်းတရားဝင်တင်ပို့နိုင်ရန် စာချုပ်ချုပ် ဆိုခဲ့ကြသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာစိုးထွန်းက”နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေ တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို တန်ချိန်နှစ်သန်း လောက်သွားတာလေ။ နယ်စပ်က မသွားဘူး။ ပင်လယ်ရေ ကြောင်းကသွားမယ်ဆိုရင် ဒီမှာရှိတဲ့ဆိပ်ကမ်းတွေက တစ်နှစ်ကို တန်ချိန်နှစ်သန်းခွဲလောက် နှစ်သန်း လောက်ပဲတင်ပို့နိုင်တယ်။ တရုတ်နဲ့တရားဝင်ဆန်တင်ပို့နိုင်ဖို့က ဆွေးနွေးနေတာကြာပြီ”ဟု ပြောသည်။ လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးပေါ်လစီသည် တရား မဝင်ကုန်သွယ်ရေးကို တင်းကျပ်စွာ ဆောင်ရွက်နေသောကြောင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ ရပ်တန့်လျက် ရှိနေသည်။
ပြည်တွင်း၌ပြည်ပပို့ဆန်ဈေးမှာကျဆင်းနေပြီး ၂၅ မတ် ဆန်တစ်အိတ်လျှင်ပုံမှန်ကျပ် ၁၉ဝဝဝ မှ ၂ဝဝဝဝ ကျော်ဈေး ရှိရာမှ ယခုအခါတစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၁၆ဝဝဝ မှကျပ် ၁၇ဝဝဝ ဈေးဖြင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း ဘုရင့်နောင် ဆန်စပါး ကုန်စည်ဒိုင်မှ အမှုဆောင် ဦးမိုးသက်အောင်က ပြောသည်။ ”ပြည်ပပို့ဆန်ဈေးတွေပုံမှန်ပြန်ပြီးကောင်းလာဖို့ဆိုရင် နယ် စပ်ကုန်သွယ်ရေးရော ပင်လယ်ရေကြောင်းပါ အပြိုင်တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်မှဖြစ်မယ်”ဟု ၎င်းင်းကပြောသည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ တရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်တွင် ယခုနှစ်အတွင်း တရုတ်သို့ ဆန်တန်ချိန်တစ်သိန်း တရားဝင်တင်ပို့နိုင် ရေးအတွက် MoU ရေးထိုးရန် ညှိနှိုင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ဈေးကွက် ပိတ်ပင်ထားမှုကြောင့် မကြာမီ ရိတ်သိမ်းတော့မည့် နွေစပါးများ ဈေးကျမည်ကို ဒေသခ??
မင်းသား တွမ်ခရုဇ်နဲ့ ယှဉ်ထိုးချင်တယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဂျက်စတင်ဘီဘာ
ချဲလ်ဆီးကြောင့် မက်ဆီ ငိုကြွေးခဲ့ဖူးကြောင်း ဆန်းချက်ဇ် ဖွင့်ဟ
ဂျီ -၂ဝ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ ဂျပန်နိုင်ငံ အိုဆာကာမြို့တွင် စတင်ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက မန်းဝင်းခိုင်သန်း မြဝတီ ခရိုင်ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်၍ လူနာများ